कोरोना महामारीमा पनि लक्ष्मी लघुवित्तको नाफा १९६ % ले बढ्यो, अन्य सूचकमा कस्तो छ सुधार ? - Arthatantra.com
कोरोना महामारीमा पनि लक्ष्मी लघुवित्तको नाफा १९६ % ले बढ्यो, अन्य सूचकमा कस्तो छ सुधार ?
काठमाडौं । लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासको वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गरेको छ ।
संस्थाले असार मसान्तसम्म १९ करोड ३१ लाख ९२ हजार रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १९६.०१ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा संस्थाको नाफा ६ करोड ५२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ मात्रै रहेको थियो । कोरोना महामारीको समयमा पनि संस्थाको निको निकै उत्साहप्रद नै रहेको छ ,
यो अवधिमा कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन मुनाफामा पनि निकै बढोत्तरी देखिएको छ । अघिल्लो आवको चौथो त्रैमासमा ३४ करोड ७१ लाख २० हजार रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको संस्थाले गत आवको सोही अवधिमा आईपुग्दा ५० करोड ७७ लाख २१ हजार रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । यस्तै सञ्चालन मुनाफापनि १० करोड २१ लाख ७२ हजार रुपैयाँबाट बढेर ३० करोड ५२ लाख ७९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
३२ करोड ४५ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको संस्थाको जगेडा कोषमा ३६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । २ अर्ब ६ करोड ९२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको संस्थाले ६ अर्ब १६ करोड ३६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ ।
संस्थाको खराब कर्जा २.२६ प्रतिशतबाट बढेर ३.२७ प्रतिशत पुगेको छ । प्रतिसेयर आम्दानी ६० रुपैयाँ ३६ पैसा रहेको संस्थाको प्रतिसेयर नेटवर्थ २१३ रुपैयाँ ८३ पैसा रहेको छ ।
वि.सं.२०७८ साउन १९ मंगलवार ११:२७ मा प्रकाशित
अघिल्लाे एनआईसी एशियाको स्वामित्वमा रहेको ८९ हजार ४३९ कित्ता सेयर बिक्री गर्दै मेरो माइक्रोफाइनान्स
पछिल्लाे कृषि अनुदान कर्जामा साना किसानको पँहुच बढाउन ग्लोबल आइएमई बैंक र तानसेन नगरपालिकाबीच सम्झौता